Kuqaqambe inhliziyo kuBarker ezakhe ziyibamba ziyiyeka inyamazane - Impempe
Kuqaqambe inhliziyo kuBarker ezakhe ziyibamba ziyiyeka inyamazane
Usale eqaqanjelwa yinhliziyo umqeqeshi weStellenbosch FC, uSteve Barker kulandela ukuhluleka wukuwina yize bahambe phambili kwaze kwakabili bebhekene neKaizer Chiefs emdlalweni weDStv Premiership eFNB Stadium ngoLwesibili kusihlwa.
IStellies ikore sekusele imizuzu engaphansana nje kwengu-20, kodwa Amakhosi abuya alinganisa. Kuthe sekusele eyishumi, yaphinda iStellies yabhakuzisa inethi yahamba phambili. Kodwa iChiefs iphinde yabuya yalinganisa, kwagcina kucazelwana amaphuzu.
“Ngicabanga ukuthi kumele ngizibambe… uyazi Uma ukhuluma nabezindaba kusanda kuphela umdlalo kunzima ngoba imimoya isuke isaphakeme,” usho kanje uBarker obebonakala ukuthi udangele ngemuva komdlalo obuseFNB Stadium ngoLwesibili kusihlwa.
“Ukuphoxeka kukhona vele ngemuva kokuhamba phambili kabili kodwa sehluleke wokunqoba. Emidlalweni embalwa edlule singenelwe amagoli ngasekugcineni, savumela amaqembu abuya athola okuthile njengakwiSuperSport (United) nje.”
Nokho uBarker ukholwa wukuthi akukubinkakhulu, inqobo nje yindlela obuka ngayo lesi Simo. “Ungabuka kufana nengilazi enamanzi anguhhafu bese uthi siphoxekile ngoba lokho akusifanele, sifanelwe okungcono kunakho.
“Noma, uyibheke ngelinye isoe ngilazi ikakhulukazi uma ubuyisa ukuthi yisizininyethu yesibilI lena kulesi sigaba ngakho ukuphuma uphoxwe wukuthi wehluleke ukushaya iChiefs nokuthi wayiyeka iMamelodi Sundowns sewuyibambile waphinde wabambana neSuperSport, lokho kukhomba ukukhula esesibe nakho njengeqembu.
“Ngakho, yize siphoxekile, kodwa kumele ngibheke nokuhle esikuzuzile kulo mdlalo. IChiefs isele ngokuthi idlale ngokulingana kunamagoli ukuthi iyoncintisana namaqembu ayisishiyagalombili aphambili e-Afrika.
“ISundowns ngelinye amaqembu amakhulu ezwenikazi. Okuphoxa kakhulu nokho ukuthi bese lusele kancane sinqobe, kodwa sahluleka. Ngicabanga ukuthi besifanelwe okungcono kule midlalo emithathu edlule.
“Kubuhlungu kakhulu, kuyasilimaza impela futhi kuyasikhathaza. Kuyinto esaziyo ukuthi uma singayilungisa, senze kangcono, ingajika lapho sibheke khona kule midlalo embalwa esele,” kuchaza uBarker.
Previous Previous post: Kusiphaphamisile ukungenelwa yigoli – Mngqithi
Next Next post: UMpengesi uzophinde axoshe omunye umqeqeshi